နိဒါန်းလိမ်အဖွဲ့သည် နိမ့်ကျသည့်ကုန်ကျစရိတ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောခေတ်မီသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး။ ၎င်းသည်အဆင့်အတန်းနိမ့်သောသတ္တုရိုင်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်းထွက် slurries များကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးခိုင်မာသောအမှုန်သိပ်သည်းဆနှင့် hydrodynamic ဆွဲခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလိမ်လည်မှုကိုအဓိကဗဟိုကော်လံတစ်ခုတွင်တည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောယူနစ်မှလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်။
လိမ်အဖွဲ့သည်ဆွဲငင်အားကိုအခြေခံပြီးသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှ 18 ချက် (18) ခုမှ 200 mesh-1 မီလီမီတာအထိ) ပစ္စည်းများမှဆင်းသက်လာသည်။
လိမ်အဖွဲ့သည်တွင်းထွက်ထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လွှာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အကြီးစားသတ္တုသိုက်များပြုလုပ်ရန်, Monazite,
ALICOCO သတ္တုနည်းပညာ Co. , Ltd. တော်လှန်ရေး နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထိမှန်ကြောင်းသက်သေပြ။
1. Customersers သည်ဓာတ်ငွေ့ဆွဲခြင်းအကျိုးခံစားခွင့်ပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဦး စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ပြုသည့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်သင်ကူညီရန်သင်ကူညီနိုင်မည်လော။
2. Spiral Channing ၏ရင်ဆိုင်ရခြင်းမှာမူရင်း groove ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးအကျိုးခံစားခွင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လှုပ်ခါခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။
4. သည်ကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုတွင်ပတ်0န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + 80 ° C အထိပုံမှန်အားဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်